Iyo processor yeApple Watch Series 5 yakafanana neiyo Series 4 | Ndinobva mac
Sezvo mazuva achifamba, zvishoma nezvishoma dzimwe dzenyaya dzakakomberedza kuvhurwa kwechizvarwa chitsva che iPhone, iPad uye Apple Watch zviri kusimbiswa wekupedzisira Gunyana 10. Kune rimwe divi, tinoona kuti iyo RAM ye iPhone nyowani yakafanana chaizvo neiyo inowanikwa muchizvarwa chakapfuura, 4 GB.
Kune rimwe divi, chimwe chinhu chinokwezva zvakanyanya ndechekuti processor inokwidza Apple Watch Series 5 yakafanana chaizvo neyatinogona kuwana muChikamu 4. Inotarisisa nekuti kusvika parizvino, Apple yakanga isina kushandisa processor imwechete muzvizvarwa zviviri zvakasiyana zveApple Watch.
Steve Troughon, mushambadzi wekushandisa, anodaro processor yeApple Watch Series 5 yakafanana nechizvarwa chakapfuura, segirafu, saka shanduko chete dzatinogona kuwana ndeye kambasi uye saizi yekuchengetedza yemukati, iyo yakawedzera kusvika 32 GB. Kana iwe uchinetsekana nezve kuita kweSystem 4 yako uchienzaniswa neiyo Series 5, unogona kukanganwa nezvazvo.
Zvinoenderana neXcode, Apple Watch Series 5 ine imwecheteyo chizvarwa CPU / GPU seApple Watch Series 4; Ini ndinofungidzira shanduko chete ndeye gyro uye 32GB yeNAND? Rutivi rwekuwedzera rweizvozvo nderwekuti isu hatifanire kunetseka nezvewatchOS iri kunonoka pane iyo Series 4 pane pane nyowani mhando
Runyerekupe kusati kwatanga kwechizvarwa chitsva ichi chakatotaura kuti Apple ingangoshandisa processor imwecheteyo muChikamu 5 semuenzaniso iyo yakatangwa gore rapfuura. Zvese zvinoita kunge zvinoratidza izvozvo Apple yanga ichida kutarisa kune dzimwe nzvimbo, Kuti uwane huwandu hwakakura hwevangangove vatengi, saka nyowani dzekupedzisa dzakatangwa, pachinzvimbo chekuwedzera shanduko dhizaini kana kuwedzera mabasa matsva.
Ndeapi Apple Watch Series 5 yekutenga
Apple inoita kuti isu tiwanikwe Apple Tarisa Studio, webhusaiti kwatinayo zvinopfuura chiuru sarudzo dzakasiyana dzekumisikidza iyo Apple Watch kuti tinoda zvakanyanya. Kana iwe uchinyatsoziva nezve yemhando yekutenga, asi iwe hauna kungo sarudza kana iyo LTE modhi iri yako, mune ino chinyorwa watinoshanda naye Jordi anokuzivisa nezve mutsauko uripo pakati pemhando mbiri idzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo processor yeApple Watch Series 5 yakafanana neiyo Series 4